Akukho ndawo yokuba lusizi okanye uloyiko engqondweni yalo mntu ufuna ukwaziwa ngaphezu kwayo yonke enye into.
Vol. 1 APRIL, 1905. 7
ICONCIOUSNESS ngumbandela wazo zonke izifundo eziza kufundwa, kwaye ke kubalulekile ukuba uqhelane nazo, ukuba umntu uza kwenza inkqubela phambili yokwenyani. Ke ngoko ukwazi oku kungumxholo wokuqwalaselwa.
Ukwazi imvelaphi, injongo, kunye nokuphela kwayo yonke inkqubo enkulu yentanda-bulumko, isayensi, okanye inkolo. Zonke izinto zinolwazi lwazo, kwaye isiphelo sazo zonke izinto ziyakwazi.
Umbuzo wokwazi ngokuqinisekileyo uya kuhlala unethemba lokuthandabuza. Abanye bazamile ukulahla umxholo besithi ukwazi ukuba sisiphumo sonyanzeliso kunye nomcimbi. Abanye babambe ukuba ulwazi lugqitha amandla omabini kunye nomba, kwaye baphinde bathi nangona iyimfuneko kubo bobabini, kodwa izimele geqe nokuba iyodwa. Abanye baye bathi ayingombandela omnye umntu anokuqikelela kuyo nayiphi na inqanaba lenzala.
Kuzo zonke izifundo, ukwazi ukuba lolona lubalaseleyo kwaye lubalulekile. Isifundo sayo sivelisa ezona ziphumo zisebenzayo. Ngayo zonke ezona njongo zethu ziphambili zifunyenwe. Ngamandla akhe zonke izinto zinokwenzeka. Ukwazi kuphela kukuxhomekeka kubomi bethu kwaye ubukho bethu. Ngaphandle kwawo besingenokwazi kwanto yehlabathi esiphila kulo okanye ngekhe sikwazi ukuba singoobani kwaye siyintoni.
Into ekufuneka sizikhathalele ngayo okwangoku ayililo igama lokwazi ngokwalo, kodwa ngalonto igama elaziwa ngalo. Isazela ayisiyonto eyaziwayo. Oko ukwazi kuphela kunjalo ngenxa yokwazi, ekubonakaliswayo kuyo.
Ukuziva sisazela yinto enye exhomekeke kuzo zonke izinto, kodwa ke nathi sihlala sinamathela ekubalulekeni kuyo kunokuba yinto emangazayo okanye umcimbi odlulayo. Mhlawumbi kungenxa yokuba ihlala inathi rhoqo kangangokuba siyayicaphukisa kwaye siyiphathe njengesibini okanye exhomekeke. Endaweni yokubonelela ngembeko, intlonipho, unqulo ngenxa yaLo, kwaye Lona kuphela; sibingelela kuthixo wethu osoloko etshintsha.
Imfihlakalo yeemfihlakalo, ukwaziwa okungaziwayo, kubonakaliswa kuthi ngokungenakuchazwa esizama ukukuchaza ngegama elithi ukwazi. Nangona enye intsingiselo yeli gama inokubanjwa ngengqondo elula ngoku, akukho mntu uphilayo oye wasombulula imfihlakalo yokugqibela yokwazi. Ngokuchasene noko, njengoko ingqondo iyaqhubeka ukukhangela, umxholo ubanzi, ubunzulu, ubanzi ngakumbi kwaye awunasiphelo, de abe umphandi, egqithisa imizimba yakhe, eme ngakwiliso elibukhali: okomzuzwana omfutshane, ngaphaya kwendawo yexesha, embundwini Ongaziwayo, ngentlonipho nangokuthula, owayebonakala enqula ngendlela engenasiphelo. Uguqukele kokungenakuchazwa, kungenakuchazeka, kungenakuchazwa, umi ngaphakathi ngaphandle kwemida yexesha, de abe iimvakalelo zothusa, umnqweno wokwazi, ukuqonda, ukubeka iingcinga ezingaphaya koludwe lweengcinga, ukubeka amagama into engenakuthethwa, ibangela ingqondo ithambe kwaye umbono usilele. Ukubuyela kwimeko apho ukuqonda kubopheleleke kwimida, uzifumana sele ekho, ekhumbula elidlulileyo kwaye elindele ikamva. Kodwa akanakuphinda angazi nto ngokupheleleyo: unqula ukungazi njengoko kubonisiwe ngenani leefom kunye neziqendu.
Ukwazi kanye into eyona nto ibonakalayo, olona lula, olona lolona lubalaseleyo nolwesingaziwayo. Indalo yonke inento yokwazi. Ukwazi akukho nto, ndawo, kunye nezinto; kodwa ukwazi konke kukwindawo yonke, kwindawo yonke yesithuba, kwaye kungaphakathi nangaphakathi macala onke e-atom yomcimbi. Ingqondo ayitshintshi. Ihlala ifana. Ingqondo iyafana nakwikristale ekruqulayo, umdiliya ophilayo, isilwanyana esikhulu, indoda ebekekileyo, okanye uthixo. Yinto ehlala itshintsha kwiimpawu zayo, iimpawu kunye nenqanaba lophuhliso. Ukuqonda okubonakalisiweyo kwaye kubonakalisiwe ngombandela kuvela kuhlobo ngalunye lokungafani, ngelixa umehluko ukho kuphela kumgangatho wombandela, ingekuko ukwazi.
Kuwo onke amabakala kunye neemeko zento, ukwaziwa kuhlala kunjalo. Ayitshintshi nangayiphi na indlela, nangaphantsi kwayo nayiphi na imeko iyenye into ngaphandle kokuqonda. Yonke imicimbi, nangona kunjalo, iyazi kwaye ifakwe kumabakala asixhenxe okanye izidanga ezihlala zibizwa ngokuba ziimazi zesazi, kodwa eyokwenene imo yomcimbi, hayi eyokwazi.
Ukusuka kwelona lizwe liphantsi ukuya kwelona liphezulu, injongo yokuqulunqwa kunye nokuguqulwa komcimbi kukwakha iifom kunye nemizimba kunye nokuyiphucula njengezithuthi zokubonisa. Imicimbi yomcimbi ziindidi ezahlukeneyo okanye inqanaba lokuphuhliswa komcimbi. La mazwe enza indalo iphela, ukusuka kwelona candelo lilula ukuya kwelona cokisiweyo lityhidiweyo.
Injongo yokuvela kwezinto kukutshintsha komcimbi de ekugqibeleni ube yingqondo. Ukusuka kwimeko yayo eyintloko engaphuhliswanga, umcimbi uqhubeka kuphuhliso lwawo ukuya ekwenziweni kwengqondo, ngohlobo ukukhula, ukukhula, ulwazi, ukungazingci, ubuThixo.
Imeko yokuqala yento yinto yokuqala okanye yeatomic. Kule meko yombuso akukho fomati kwaye wazi kwinqanaba elilula kuphela.
Imeko yesibini yemicimbi yiminerali okanye imolekyuli. Kwimo yokuqala ii-atom ziyagqabhuka, kwaye ngenxa yophuhliso lwangaphambili, zoba ezinye ii-atom ezingaphuhliswanga malunga noko. Ngale nto idibanisa, i-condence, i-crystallize, kwifom yekhonkrithi eqinileyo, kwaye ke iya kuba nolwazi ngombuso owahlukileyo kwi-atomic. Njenge-atom yayisazi imeko yayo kuphela, enganikwanga thuba lokuba iveze ukwaziwa ngaphandle kwemeko yayo engahambelaniyo. Nje ukuba i-atom idibane nezinye iiatom, iyanda ekukhuleni kwayo, ikhokelele iiatom yayo, ephakathi kwayo, kwaye igqitha isuka kwimeko ye-atomic yengeniso iye kwisimo semolekyuli, apho ikhula khona ngohlobo . Imaminerali okanye imolekyuli yento inobuhlobo obuqinileyo kumcimbi wokuqala kwaye ibonisa impembelelo enamandla kuwo onke amandla asisiseko. La mandla aboniswa kwimagnethi.
Imeko yesithathu yemicimbi yimifuno okanye iselula. I-atom ekhokele ezinye iathom ize ibe yi-molekyuli, itsalela ii-molekyuli ezingaphuhliswanga kwaye ibakhokele kwimeko yemolekyuli yento, ebumba ubukhosi beminerali, kwisimo sezinto esaziwayo, esibonakaliswa njengobukumkani bemifuno, kwaye sibe siseli. Into yeseli iyazi kumanqanaba ahlukileyo kunento yemolekyuli. Ngelixa ukusebenza kwe molekyuli kwakuyimo ehleliyo, ukusebenza kweseli kukukhula komzimba. Lo mbandela uphuhliswa ngobomi.
Imeko yesine yento sisilwanyana okanye into ephilayo. I-atom ekhokelele ezinye iathom kwisimo seemolekyuli, kwaye isuka kwiselfowuni kuyo yonke indawo yemifuno, igqitha njengeseli emzimbeni wesilwanyana, kwaye ichukunyiswa koko kukwaziwa njengoko kubonakalisiwe kwisilwanyana, isebenza kwilungu Kwisilwanyana, ke ilawula ilungu ize ekugqibeleni ikhulele kwimeko yezilwanyana eyaziwayo. Emva koko kuthatha ulawulo kunye nokuqhubela phambili, ukusuka kwisilwanyana esilula ukuya kwesona silwanyana sintsokothileyo.
Imeko yesihlanu yemicimbi yengqondo yomntu okanye i-I-Am-I. Ngexesha leminyaka engenakubalwa, i-atom engenakubalwa eye yakhokelela kwezinye iiatom kumaminerali, ngokusebenzisa imifuno, ukuya kwisilwanyana, ekugqibeleni ifikelela kwisimo esiphakamileyo sento apho kubonakaliswa ukwaziwa okukodwa. Ukuba ngumntu ozimeleyo kunye nokubonisa ukwazi ngaphakathi, icinga kwaye iyathetha njengam, kuba ndiluphawu lwaLowo. Umbutho woluntu uye phantsi kwesikhokelo sayo umzimba olungelelanisiweyo wesilwanyana. Umzimba wezilwanyana unyanzelisa ilungu ngalinye lazo ukuba lenze umsebenzi othile. Umbutho wecandelo ngalinye uyalela iseli nganye ukuba yenze umsebenzi othile. Ubomi beseli nganye bakhokela iimolekyuli nganye ekukhuleni. Uyilo lwe molekyuli nganye luhlanganisa i-atom nganye ukuba ibe ngendlela elungeleleneyo, kunye nokuqonda kubethelela i-atom nganye ngenjongo yokuzazi. Iathom, iimolekyuli, iiseli, amalungu, kunye nezilwanyana, zonke ziphantsi kolawulo lwengqondo-imeko yokuziqonda imeko-umsebenzi wengcinga. Kodwa ingqondo ayikufumani ukuzazi, olu luphuhliso olupheleleyo, de ibe yoyise kwaye yalawula yonke iminqweno kunye neembonakalo ezifunyenwe ngeemvakalelo, kwaye igxile kuyo yonke ingcinga yokwazi njengoko ibonakaliswa ngaphakathi. Ke kuphela kokuzazi ngokupheleleyo; nasembuzweni wakhe: ndingubani? Unokwazi, uphendule: Ndim. Oku kukungafi.
Imeko yesithandathu yemicimbi ngumphefumlo wobuntu okanye u-I am-Wena-ngu-Wena-ngu-Wena. Ingqondo sele yoyisile konke ukungcola kumcimbi wayo kwaye ifumene ulwazi lwayo, inokuhlala ingafi kule meko; kodwa ukuba ifuna ukwazi, iya kuba nakho ukwazi njengoko kubonisiwe kuzo zonke iingqondo zoluntu. Ingena kwimeko yokuba sezingqondweni zabo bonke abantu.
Kule meko I-I am-Wena-Wena-ngu-Nguwe-I-Pervell wonke umntu ongumntu kwaye uzive ungumntu.
Imeko yesixhenxe yemicimbi nguThixo okanye ubuThixo. Umphefumlo wobuntu okanye u-I am ngu-Wena-ngu-Nguwe-wena, ezinikela ukuze ulungele konke, iba yeyaphezulu. Izidalwa eziManyeneyo zibe munye, ubuntu-obufana nobabantu, abantu, izilwanyana, izityalo, izimbiwa, kunye nezinto.
Singabantu abaziqapheleyo ukuba bangabantu ngengqondo yokuba eyona nto ibonakalayo ibonakalisiwe ezingqondweni zethu. Kodwa iingqondo zethu zikwabonakalisa imihlaba eyahlukeneyo yombandela ebonakalisa iimvakalelo ezingenakubalwa, iminqweno kunye neminqweno. Ukuphambanisa impermanent, i-evanescent, ukwazi okungaguquki okungapheliyo, umntu ngamnye uzichaza njengomzimba endaweni yokuba wazi. Esi sesona sizathu sako konke ukudakumba nosizi. Ngokuqonda ngaphakathi kwengqondo ukwazi okungapheliyo kwaye unqwenela ukumanyaniswa nako, kodwa ingqondo ayinakukhetha phakathi kokwenyani kunye nolobuxoki, kwaye kwiinzame zalo zokucalucalucalulo ziyahlupheka. Ngomzamo oqhubekayo ngamnye wethu uya kuthi ekugqibeleni afikelele kwi-golgotha ​​yokubandezeleka kwaye abethelelwe emnqamlezweni phakathi kwephithiphithi yaphantsi komhlaba kunye nobungangamsha behlabathi. Ukusuka kolu lubethelelo uya kuvela umntu omtsha, ovuselwe ekwazini okungaphaya kwengqondo ozazi kakuhle, ukuya kumphefumlo we-I-am-You-You-You-I Uvuswe ke yena ungumkhuthazi weinzame ezivuselelweyo zokunceda abanye, kunye nesikhokelo kubo bonke abantu ababeka ukholo lwabo kuLwazi olunye.